Intaba izimbuzi - ngokumangalisayo zilwane ezinhle ezihlala kule ndawo ngesimo sendawo enezintaba. 8 zilwane eyaziwa lezimbuzi, bonke babo abahlala ezintabeni zakwa-Eurasia kanye naseNyakatho Afrika. Kuye zilwane, isisindo sesilwane kungenzeka kusukela kg 35 200, ukuphakama 65 - 115 cm, ubude umzimba 1 -. 1.7 m kwabesilisa kuka nabesifazane emikhulu Imizimba nesilevu of izinwele ezinde, futhi isikhathi eside, eyinkimbinkimbi izimpondo curled. Olunye uhlobo, zingabantu iqonde, abanye engonxantathu wangaphakathi emaphethelweni phansi, isikela emise noma ngesimo Kuvunguza flat. Kwabesifazane, izimpondo basuke sifushane, 20 kuphela - cm 40.
Zonke zasezintabeni yizilwane enamandla kakhulu futhi beshesha. Zihlala ezintabeni endaweni engamamitha 2500 - 5000 amamitha ngaphezu kolwandle. Ngenxa isisindo esindayo futhi Yakha esindayo, ugijima, awayona fast kakhulu, ngakho ukuze ukubaleka woshushiso, ukukhuphuka emadwaleni. Abasakwazi kalula futhi ngokwemvelo ngisho uzizwe edwaleni emaweni, ezingeni ukuphakama isiyezi. Siyeza, + siqombola emithambekeni emaweni, bona asesabi kwenhlabathi ezingakufaka ngisho eyodwa hambisa okungalungile. Ukuzwa ukuthi amatshe phansi kwezinyawo zakhe ukuqala ukuhambisa, ibhokisi kuphela kancane ukubambezela ebaleka ekuhambeni kwabo.
Ikhono elinjalo zabo ukuba zikwazi ukuhamba emithambekeni cishe mpo, ku enamadwala ezineqhwa cornices kwenza kube nokwenzeka ukuba ugcine ukushushiswa ngisho ingwe. Yebo, futhi umgibeli lochwepheshe akunakwenzeka ukuba ngobuciko ekhuphukela phezulu, efana izimbuzi zasezintabeni. Ake ubone ngeso lengqondo lezi zilwane ezimangalisayo lapho they bekezelela, kubonakala, ku eweni, kuba yesiteleka. Abeve kuyoke khona?
Intaba izimbuzi siphile phezulu ezintabeni, ehlobo bakhetha ziklaba Ezimfundeni eziphakeme, futhi ebusika, abanye wezilwane ukuthi wehlela phansi ehlathini, abanye bahlale ezinkangala. Bakhetha ukugwema abantu, ngakho bephoqeleka ukuba uhambe phezu okwakheke rock noma abayizithulu ihlathi amapheshana lezo zindawo lapho kokudla imfuyo.
ZaseCaucasia yasezintabeni iyasebenza ekuseni nakusihlwa, ubusika uya ziyofuna ukudla emini. Yidla izilwane ikakhulukazi utshani, nezithelo amahlamvu kusukela nezitshalo ezokudabuka kwamanye amazwe, ebusika badle amahlumela utshani obomile. Bakhetha ukuhlala nezinkomo izilwane ezingaba ngu-15, futhi kungaba uhlala wedwa. Winter iwe atholakala emithambekeni aseningizimu, lapho kungekho iqhwa kanye utshani kungatholakala isikhathi ezishisa kuthiwa ukuthuthela eduze snowfields kanye nokuncibilika kwezinguzunga zeqhwa.
Intaba izimbuzi kungaba ozibongayo kahle kakhulu, babona endaweni engaba ikhilomitha elilodwa, umuntu bangazizwa amakhulu amamitha, ngakho akulula kangako ukuthola lesi silo sasendle. Uma ungaphazamisi nezimbuzi uncamela ahole indlela yokuphila ngaphandle kokuzivivinya, ziklabe otshanini, lalala ilanga. Ngo sezulu esibi izilwane bafuna emihumeni, kodwa njalo ukubonakala ezinhle ukuzibona ingozi.
Ghosn iqala ekupheleni kwekwindla, ke ukuya kwemphi lematima phakathi kwabesilisa kwabesifazane. Kid ozalwa ngasekupheleni kwentwasahlobo, ngemva kwesonto izingane bakhululekile ukulandela unina, ukugibela ngesibindi phezu kwamadwala. Izimbuzi ukuhlala nonina mayelana 1 unyaka. Ezikhathini zasendulo, zasezintabeni babe main game zasendle ukuze Mountaineers. Namuhla inombolo yabo akuyona omkhulu njengoNkulunkulu singathanda. Eziningi zalezi izilwane uyaziqhenya zibulawa izikhukhula zeqhwa ezintabeni ze, lapho uya entwasahlobo ebusika. Ikakhulukazi abathintekayo kukhona abesilisa, ngoba ukukhuphuka njalo ephakeme kunaleyo nabesifazane.
State Yemvelo Reserve "Nenetsky": umhlaba, izilwane kanye nezitshalo
Ukubolekisa ngezindodla izikhukhula eJapane, senziwa isishingishane eqinile
Isimo sokukhululeka ngokwenkolo eMpumalanga Ekude yeRussia
Kuyini transpiration? Izici amanzi ukusetshenziswa izitshalo
Izilwane zihluke izitshalo: izici eziyinhloko
Blu-Ray-actuators: izici, ukubuyekeza kanye impendulo
Ukukhathala Nervous: Izimpawu, Ubangela, Ukwelashwa
Kungani iphupho ukhiye ngawe
Hemorrhoids kwabesifazane. Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Bangaki igolide Russian? Ezigcina igolide Russia
Data nokuvikeleka ngenhla zonke: indlela ukususa ukungena kokukude computer
I ukuzilibazisa isikhungo "Oka" (Ryazan esifundeni): incazelo kanye nokubuyekeza